Zvimwe Zvikoro Zvorambidza Vabereki Kushanyira Vana Vavo Pachityirwa Korera
Gunyana 22, 2018
Zvimwe zvikoro zvakaita seChinhoyi High mudunhu reMashonaland West zvave kurambidza vabereki vane vana vanodzidza vachigara muzvikoro izvi kushanyira vana vavo kana kuvaigira chikafu senzira yekudziviri kupararira kwechirwere chekorera.
Mumwe wevanochengeta vana vanodzidza vachigara pachikoro cheChinhoyi High asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau ati hapana mubereki ari kubvumidzwa kuuya pachikoro apa, uye hapana chikafu chekunze chiri kubvumidzwa pachikoro apa.
Muchengeti wevana uyu ati pachikoro apa pane dambudziko rekushomeka kwemvura zvekuti vehutano vakavabvakachira vachiona kuti zvakamira sei pachikoro.
Mumwe mubereki, VaSimon Moyo, avo vanga vauya kuzoona mwana wavo vaine zvekudya, vati varambidzwa. Vatiwo vakuru vechikoro vanofanirwa kupatsanura zvekudya zvingangoita korera kwete kurambidza zvekudya zvese zvese nezvinenge zvatengwa muzvitoro.
Zvichakadaro, vamwe vanotengesa zvinhu muChinhoyi vashoropodza hurongwa hwekanzuru hwekubhadharisa zvimbuzi uye kuti vatengesere pedyo nezvimbuzi.
VaKillian Mashoko vati kanzuru inofanirwa kumbomisa kubhadhariswa kwezvimbuzi zviri munzvimbo dzekutandarira mudhorobha.
VaMashoko vati kanzuru haifanirwe kupa vanhu pekutengesera pedyo nezvimbuzi izvo vanoti hazvina hutano.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa divi rekanzuru yeChinhoyi panyaya iyi.
Hurumende yakambomisa kuungana kwevanhu vakawanda panzvimbo imwechete nechinangwa chekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera icho chauraya vanhu makumi matatu nevaviri munyika pari zvino.
Chirongwa cheZimbabwe International Book Fair changa chichifanirwa kutanga muHarare neMuvhuro, chakambomiswa nekuda kwechirwere chekorera icho chatekeshera muHarare, zvikuru munzvimbo dzinogara veruzhinji dzeGlen View neBudiriro.